Itoobiya | KONGOLISOLO
Maxay ugu beddeleen OAU UA? Ururka midowga afrika (OAU) waxaa la aasaasay sanadkii 1963 iyada oo lagu dhiira gelinayo boqorka itoobiya Hailé Sélassié, kaas oo si guul leh u hor istaagay wadadii gumeystaha.
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 5, 2020 06: 06 No Comments
Marka lagu daro howsha midnimada, wadajirka iyo iskaashiga ka dhexeeya waddamada cusub ee Afrikaanka ee xorta ah (sanadihii 60-aadkii badiyaa), OAU waxay isu dhiibtay sidii ...	Akhri wax dheeraad ah
Israa’iil waxay qiraysaa in dumarka Itoobiyaanka ah ee dhalasho ahaan ay xakameyn karto, ay soo koobeyso maalin kasta. Wasiirka Caafimaadka ayaa weydiiyay dhammaan dhakhaatiirta haweenka iyo afarta urur ...	Akhri wax dheeraad ah
Waxaan joognaa 1920-kii magaalada Adis-Ababa: askari Itoobiyaan ah oo wata daanyeerro ka soo jeeda boqortooyadii qadiimiga ahayd ee Abisiniya, maanta Itoobiya “Boqortooyada Abisiniya ama Itoobiya waxay ahayd boqortooyo Madow / Afrikaan ah oo u dhexeysa Suudaan, l. 'Bariga Afrika, Ereteriya iyo Somaliland'
Posted By: KongoLisolowaa: May 19, 2020 03: 05 No Comments
Ballaadhinkeeda dhuleed ayaa ku fidsan illaa Hooyada Cas ee ku wajahan Yemen ee Carabta. Abyssinia waxay aragtay isku xigxig boqortooyo Christian Orthodox oo qarniyaal iska caabin ...	Akhri wax dheeraad ah